သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ | အော်ဂဲနစ်လျှော်
သီးသန့်တည်ရှိမှုသည်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီးသင်၏ယုံကြည်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ privacy ကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားပါသည်။ တရား ၀ င်ကာကွယ်မှုနှင့်သင်၏တရားဝင်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုလည်ပတ်သောအခါသင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်သည့်အခါဥပဒေရေးရာပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုတင်းကြပ်စွာစောင့်ကြည့်ပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်း၊
ဤစာရွက်စာတမ်းကိုသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဆာ၏ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်ပုံနှိပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သိမ်းနိုင်သည် (သာမန်အားဖြင့်“ File” tab သို့သွားပြီး“ As as” ရွေးပါ။ )
၁။ တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောပါတီ
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့မှာ -
အော်ဂဲနစ်လျှော်, Strandvejen 70
သင်သည် Organic Hemp မှသင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုကန့်ကွက်လိုပါကဤသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အညီသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကန့်ကွက်ခြင်းကိုအောက်ပါလိပ်စာများသို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေပေးပို့နိုင်သည်။ :
၂။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုသည်မှာသင်၏အချက်အလက်၊ သင်၏အမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာနှင့်သင်၏သုံးစွဲသူအကောင့်ကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောစာရင်းအချက်အလက်များစသည့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှစာရင်းအင်းအချက်အလက်များ၊ ဥပမာကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုသင်အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိသောကြောင့်ဤအမျိုးအစားတွင်မပါဝင်ပါ။
သင်၏သိုလှောင်ထားသောစာရင်းအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ ၎င်းတွင်စကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ ယခုမှ စ၍ သင်၏ဖောက်သည်အကောင့်ထဲသို့စကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤတွင်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအမှာစာများ၊ အချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ မကြာသေးမီကတင်ပို့လိုက်သောအမှာစာများအားကြည့်ရှုခြင်း၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များနှင့်သတင်းလွှာများရရှိရန်ရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်၏အကောင့်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားသင့်သည်၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတတိယပါတီများသို့လက်လှမ်းမမှီစေရန်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်တာဝန်မရှိပါကသင်၏စကားဝှက်ကိုမလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါကအမြဲတမ်းအလိုအလျောက် log in လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းပြန်လည် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအရသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုပြောင်းလဲလိုပါကသို့မဟုတ်မှာကြားလွှာတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါကသင်၏စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရမည်။
၂.၃ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
တနည်းကား, privacy ကိုငါတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မည်သည့်နောက်ဆက်တွဲအာမခံချက်များအပါအ ၀ င် ၀ ယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တစ်လျှောက်လုံးသင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်၊ သိုလှောင်သည်။ သိုလှောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တိုးတက်ရန်နှစ် ဦး စလုံး။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့သာပေးပို့လိမ့်မည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်သင်၏အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရန်သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်သည်အထူးအခြေအနေများအတွက်ယခင်ကသဘောတူခဲ့လျှင်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည် Organic Hemp ပြင်ပသို့သာပေးပို့လိမ့်မည်။ အော်ဒါအပြောင်းအလဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်သောပို့ဆောင်သူများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဘဏ်များသည်သင်၏မှာကြားမှုအတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးတဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တာ ၀ န်ကိုကျေပွန်ဖို့သာသုံးနိုင်ပါတယ်။ အခြားသတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုမှုကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ သင်၏အမှာစာကိုလက်ခံရန်၊ သင်၏မှန်ကန်သောအမည်၊ လိပ်စာနှင့်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးသင်နှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြီးသင်၏အမှာစာကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းကိုအတည်ပြုနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာလိုအပ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အသေးစိတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။ သင်၏ဒေတာကိုအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ရန်တောင်းဆိုသည့်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုသင်ဖိုင်တင်နိုင်သည်။ သင်၏အချက်အလက်များသည်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်မလိုအပ်တော့လျှင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
သင်၏အမှာစာများနှင့်သင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းအပြင်သင့်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာမကသင်၏စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကိုဝေမျှရန်သင့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသောသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်လုံလောက်သည်။
ဤအပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာ၏အကြောင်းအရာများအပြင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုကန့်ကွက်ရန်သင့်အခွင့်အရေးအကြောင်းကိုလည်း၎င်းကသင့်အားအသိပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုရယူရန်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖြည့်စွက်ပြီးအတည်ပြုပေးသည့်အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပေးပါ။ သို့မှသာတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာများ၏ကြော်ငြာများကိုလက်ခံသည် - ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်အထူး ကမ်းလှမ်းမှုများသာမကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်သတင်းအချက်အလက်ဆောင်းပါးများလည်းပါဝင်သည်
သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလျှောက်ထားပြီးပါကအီးမေးလ်လိပ်စာ၊ အတည်ပြုသည့်အချိန်နှင့်အီးမေးလ်ကို MailChimp မှတဆင့်သိမ်းဆည်းပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်ပြုလုပ်သည့်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုမဆို MailChimp မှတဆင့်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
MailChimp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, USA) မှလည်ပတ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသူတို့၏ဆာဗာများနှင့်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကို၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ MailChimp သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများအရသတင်းများလက်ခံရရှိသူများမည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ကိုခြေရာခံခြင်းသို့မဟုတ်သတင်းလွှာများ၏အပြင်အဆင် / ဒီဇိုင်းကိုမည်ကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်လစီများအရ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်ဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ MailChimp သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့လွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
MailChimp ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာကတိတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်၎င်းကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားမထုတ်ဖော်ရန်ကတိပြုထားသော MailChimp နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စည်းနှောင်ထားသောသဘောတူညီချက်ရှိသည်။ MailChimp ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်နိုင်သည်။
သတင်းလွှာများတွင် web-beacon ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ newsletter ဖွင့်သောအခါ MailChimp ဆာဗာမှထုတ်ယူသည့် pixel အရွယ်ဖိုင်။ ထို့ကြောင့် MailChimp သည်သင်၏ဘရောက်ဇာ၊ IP လိပ်စာနှင့်ကြည့်ရှုသည့်အချိန်တို့ကဲ့သို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူသည်။ သင်၏စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့၏နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။
အသေးစိတ်လေ့လာရန်ဤစာရင်းအင်းစစ်တမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မည်သည့်လင့်ခ်များကိုနှိပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဒီသတင်းအချက်အလက်တစ် ဦး ချင်းစီသတင်းလွှာလက်ခံသူများမှတာဝန်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်အသုံးပြုသူများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့ MailChimp ၏ဆန္ဒသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်သူများအကျိုးစီးပွားနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုမည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ကိုဆိုလိုသည်။
သတင်းလွှာကိုလက်ခံသူများကို MailChimp ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးနိုင်သည့်ကိစ္စများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြသနာများကြောင့်သတင်းလွှာကိုကြည့်ရှုရန်သင်အခက်အခဲရှိပါကအွန်လိုင်းသတင်းလွှာကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်လင့်ခ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ထို့အပြင် MailChimp ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှလက်ခံသူများသည်သူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောသူတို့၏အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပြောခဲ့သမျှကိုဆိုလိုတာက၊ MailChimp အပြင်သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဂူဂဲလ် Analytics ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကကွတ်ကီးကိုသုံးပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစီမံသည်။ ဤအချက်အလက်စုဆောင်းမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင် MailChimp ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကောင်အထည်ဖော်သောဒေတာစုဆောင်းခြင်းကိုကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည့်အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းလည်းအသိပေးလိုပါသည်။ AboutAds နှင့်သင်၏အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုများ။
ရပ်စဲခြင်း / ရုပ်သိမ်းခြင်း
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုအချိန်မရွေးဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ တပြိုင်နက်တည်း၊ သင်သည် MailChimp ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်ရာစာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုအားလုံးရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သီးခြားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ကံမကောင်းစွာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သတင်းလွှာကိုဖျက်သိမ်းရန်လင့်ခ်ကိုသတင်းလွှာတစ်ခုချင်းစီ၏အောက်ခြေတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Organic Hemp ၏ဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏တန်ဖိုးရှိသောအကြံပြုချက်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပုံမှန်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သတင်းလွှာကိုသင်မှာယူသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေဤအကြံပြုချက်များကိုပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်မကြာသေးမီက ၀ ယ်ထားသောဝယ်ယူမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်။ သင်သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့်မည်သည့် Organic Hemp ကြော်ငြာများကိုမဆိုထောက်ခံချက်မခံလိုပါကသင်အမြဲတမ်းကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်လုံလောက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Organic Hemp အီးမေးလ်အားလုံးမှာ unsubscribe link ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များသည်စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုဖောက်သည်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိမှုဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်များ; operating system နှင့်ပလက်ဖောင်း; သင်၏အမှာစာသမိုင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုသမိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သင်လာရောက်သည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်၊ နှင့်သင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်များကိုသီးခြားအမည်ဖြင့်သီးသန့်အသုံးပြုသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောဒီဇိုင်းကြော်ငြာများလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာကို ပိုမို၍ အသုံးဝင်စေရန်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ကလောင်အမည်ပေးထားသောအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျွန်တော်တို့ကိုကျပန်းနှင့်အလွန်အကျွံသငျသညျအကူအညီမဲ့ကြော်ငြာမပေးပို့ကြစေရန်သေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ကိုက်ညီသည့်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်သတင်းလွှာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များစသည့်ကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမလိုအပ်သောအီးမေးလ်များကိုသင့်ထံပို့ခြင်းမပြုရန်သင်ဖွင့်ထားသောမည်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာအီးမေးလ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ခြေရာခံသည်။ ဤစာချုပ်ကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အောက်ပါကြေညာချက်ကိုသဘောတူသည်။ Organic Hemp သည်ကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အကောင့်တွင်သိမ်းထားသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုသာမကကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်ကြော်ငြာခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ငါ့ကိုဖော်ပြရန်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာကိုမရယူလိုပါကမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပုဒ်မ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်လုံလောက်သည်။
၂.၄.၄ SWEPSTAKES, စျေးကွက်နှင့်အမြင်သဘောထား
လှူဒါန်းသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဆုများရရှိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများအားပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာ raffle အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုဈေးကွက်နှင့်ထင်မြင်ချက်သုတေသနအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီသီးသန့်အမည်ဝှက်ထားသောအချက်အလက်များကိုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာမက Organic Hemp / OrganicHemp.eu အတွက်သာအသုံးပြုပါသည်။ သင်၏စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအပေါ်သင်၏တုန့်ပြန်ချက်များကိုမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီများသို့ထုတ်ဝေခြင်းမပြုပါ။ ဤစာချုပ်ကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အောက်ပါဖော်ပြချက်ကိုသဘောတူသည်။ OrganicHemp.eu သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်နှင့်ထင်မြင်ချက်များအတွက်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏ဒေတာကိုစျေးကွက်နှင့်ထင်မြင်ချက်သုတေသနအတွက်အသုံးပြုရန်မတောင်းဆိုပါ။ ပုဒ်မ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်လုံလောက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စစ်တမ်းအီးမေးတိုင်းမှာစာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိသော link ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူရေးစာချုပ်မချုပ်ဆိုမီခရက်ဒစ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါသည်။ သင့်အားငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုများကိုတားဆီးရန်အတွက်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ခရက်ဒစ်စစ်ဆေးမှုသည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်လိမ်လည်မှုနှင့်အခြားရာဇ ၀ တ်မှုများမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ခရက်ဒစ်စစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောဒေတာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ငွေပေးချေမှုပုံစံကိုမှာယူနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အခြားအရာများအပြင်ယခင်အမှာစာအားလုံးကိုသင်၏ဖောက်သည်အကောင့်တွင်စစ်ဆေးသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ပေးပို့သည့်လိပ်စာသည်သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာနှင့်ကွာခြားမှုရှိမရှိ၊ ၄ င်းသည်ပို့ဆောင်မှုလိပ်စာအသစ်လား၊ သို့မဟုတ်အမှာစာကိုအခြားရေကြောင်း ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာသို့ပို့သင့်သလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောအချက်အလက်များအပြင်ပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှအချက်အလက်များကိုလည်းသင်၏အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပြီးခရက်ဒစ်စစ်ဆေးမှုကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် (ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ သင့်လိပ်စာနှင့်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင့်မွေးနေ့) ။ infoscore Stripe: ဒေတာဖလှယ်မှုသည်အောက်ပါအကြွေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်သည်
ဤခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အေဂျင်စီသည်ကျွန်ုပ်တို့မှပေးပို့သောအထက်ပါအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သင်္ချာဆိုင်ရာစာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (အမှတ်ပေး) ကို အခြေခံ၍ သင်၏အကြွေးယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုသင့်လျော်သောအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မှပေးပို့သောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်သည့်အေဂျင်စီသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကိုအခြားကုမ္ပဏီများ (ဥပမာအခြားအွန်လိုင်းကုန်သည်များ) အတွက်လိပ်စာစိစစ်အတည်ပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးတွက်ချက်မှုတွင်သင်၏လိပ်စာအချက်အလက်လည်းပါဝင်သည်။ အော်ဒါမှာယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဘဏ်အချက်အလက်များကို (IBAN နှင့် BIC သို့မဟုတ်အကောင့်နံပါတ်နှင့်ဘဏ်ကုဒ်များသာ) infoscore Consumer Data GmbH (ICD) ၏ Rheinstr နှင့်ပြန်လာ - ငွေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (RPP) နှင့်ကိုက်ညီသည်။ 99, 76532 Baden-Baden ။ RPP တွင်သော့ခတ်ထားသောဖိုင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေခြင်းမပြုရပါကခွင့်ပြုပါကသင်၏ဘဏ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (IBAN နှင့် BIC မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမျှသာမဟုတ်ပါ) ICD ၏ RPP သို့တောင်းဆိုမှုအရဤပိတ်ဆို့မှုကိုဆက်သွယ်ပေးလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားကုမ္ပဏီများမှရန်။ ပြန်အမ်းငွေပေးဆောင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ RPP တွင်အခြေချမှုကိုတင်ပြမည်။ သင့်အားကမ်းလှမ်းသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း (များ) နှင့်သင်သဘောမတူပါကကျွန်ုပ်တို့အားစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ privacy@OrganicHemp.eu သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေအကြောင်းကြားပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားပါမည်။ သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအချိန်မရွေးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်လုံလောက်သည်။
cookies များကိုလက်ခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်ပတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookie ကိုမဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အကန့်အသတ်ရှိကြောင်းထောက်ပြသည်။
cookies ဆိုတာဘာလဲ။ Cookie ဆိုသည်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်မှပေးပို့သောအချက်အလက်သေးငယ်သည်။ အသုံးပြုသူကြည့်ရှုနေစဉ်အသုံးပြုသူ၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကအသုံးပြုသူ၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ Cookies များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်မိရန် (အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုရှိစျေးဝယ်ခြင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောပစ္စည်းများကဲ့သို့) သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ၏လှန်လှောလှုပ်ရှားမှု (အထူးခလုတ်များကိုနှိပ်ခြင်း၊ လော့အင်ဝင်ခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်စာမျက်နှာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းစသည်တို့အပါအဝင်) ကိုမှတ်မိစေရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောယန္တရားဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ယခင်တုန်းက)။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ cookie အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သင်ကသင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိုက်သော session cookies ဟုခေါ်သည်၊ သင်၏ hard drive တွင်ကြာရှည်သောသို့မဟုတ်အဆုံးမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသိုလှောင်ထားသည့်တည်မြဲသော cookies များ။ ဤသိုလှောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ယခင်ကအမည်များ၊ လိပ်စာများ၊ စကားဝှက်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်စသည်ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသောမတရားနယ်ပယ်များကိုမှတ်မိခြင်းဖြစ်သည်။
OrganicHemp.eu သည်မည်သည့် cookies များကိုအသုံးပြုသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookies အများစုသည် session cookies များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် browser session အပြီးတွင်သင်၏ hard drive မှအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထပ်ခါထပ်ခါပြောရန်၊ စာမျက်နှာများစွာတွင်စျေးဝယ်ခြင်းလှည့်ကွက်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ဥပမာအားဖြင့်၊ cookies cookies များလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ hard drive တွင်ကျန်ရှိနေသော cookies များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အခြားလည်ပတ်မှုတစ်ခုတွင်သင်၏သွင်းအားစုများနှင့်ဆက်တင်များကိုသင်မှတ်မိပြီးသင်နှင့်အတူလှည့်လည် / ဈေးဝယ်နေသည်ကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤယာယီ / အမြဲတမ်း cookies များကိုသင်၏ hard drive တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး၎င်းတို့သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ထားသောရပ်စဲသည့်ရက်စွဲ (တစ်လမှဆယ်နှစ်အတွင်းမည်သည့်သက်တမ်းမဆို) ရောက်ရှိသောအခါတွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ဤ cookies မ်ား၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာအဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွတ်ကီးများကသင့်အတွက်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုစိတ် ၀ င်စားသည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီး၎င်းကိုတက်ကြွစွာပြသသည်။
cookies များကိုမည်သည့်အချက်အလက်သိမ်းဆည်းထားသနည်း။ Organic Hemp အသုံးပြုသော cookies များသည်အမည်ဝှက်အချက်အလက်များကိုသာသိမ်းဆည်းသည်။ ကွတ်ကီးများကိုဖွင့်သောအခါကွတ်ကီးတစ်ခုစီအားသင်၏နံပါတ်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် cookie ထဲသို့အောက်ပါအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏အမည်၊ IP လိပ်စာနှင့် / သို့မဟုတ်သင်နှင့်သာတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နိုင်သည့်အလားတူအချက်အလက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုပေါင်း၍ အမည်ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာရရှိသည်။ ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့ဆိုင်၏စာမျက်နှာများကိုမည်သည့်စာမျက်နှာများသို့လည်ပတ်ခဲ့သည်၊ ထုတ်ကုန်များကိုကြည့်ရှုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဝဘ်ဆိုက်ပစ်မှတ်ကဘာလဲ? ကျွန်ုပ်တို့၏ Organic Hemp ဝက်ဘ်ဆိုက်များကကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာနှင့်အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန် cookie နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအချက်အလက်သည်သင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်ရန်မဟုတ်ဘဲဝဘ်ဆိုက်လုပ်ဆောင်မှုကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုဘယ်တော့မျှပေါင်းစည်းမည်မဟုတ်ပါ။ တနည်းကား၊ ဤနည်းပညာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကသင်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများနှင့် / သို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများ / ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားတင်ပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဆွဲဆောင်ရန်နှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
တတိယပါတီကွတ်ကီးများလည်းရှိသည်။ OrganicHemp.eu သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေရန်အတွက်ကူညီသောကြော်ငြာမိတ်ဖက်များကိုအသုံးပြုသည်။ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများမှ Cookies များကိုသင်၏ hard drive တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်သို့ရောက်ရှိပြီးသည့်နောက်အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်သည့် persistent cookies များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီများမှကွတ်ကီးများသည်လည်းအမည်ဝှက်ပြီးအများအားဖြင့်အမည်မသိသောအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်တွင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေသည်စသည်တို့စသည်တို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာသူများသည်သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လည်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေကြသည်။ ဤကလောင်အမည်အမည်သင့်ဒေတာနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ပေါင်းစည်းမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအားသင့်အားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောကြော်ငြာများကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြန်လည်ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည်ပြန်လည်ပစ်မှတ်နည်းပညာဟုခေါ်သည်။ အင်တာနက်ကိုသင့်အတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေရန်ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်ကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်ကိုစိတ် ၀ င်စားနေသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအားကြော်ငြာများကိုပြသစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုဖော်ပြခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်ရည်ညွှန်းချက်မရှိသောကျပန်းကြော်ငြာများထက်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုသူအတွက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်ကွတ်ကီးနည်းပညာနှင့်အသုံးပြုသူ၏အပြုအမူကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤကြော်ငြာပုံစံသည်လုံးဝအမည်ဝှက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းများကိုပေါင်းစည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွတ်ကီးများဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသဘောတူခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဘရောင်ဇာလုပ်ဆောင်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်၏အချက်အလက်များကို cookies များတွင်သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီးနောက်လာမည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်၏ browser setting ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ဤသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ကွတ်ကီးများသိမ်းဆည်းခြင်းကိုသင်မည်သို့ကာကွယ်နိုင်သနည်း။ သင်၏ browser တွင် cookies များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သဘောတူနိုင်သည်။ သင်သည် Organic Hemp cookies များကိုသာလက်ခံချင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ service provider များနှင့်ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များ၏ cookies များမဟုတ်ပါကသင်၏ browser ၏ setting တွင် ("third-party cookies များကို block" ကိုရှာပါ) သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၏ menu bar တွင်၊ အကူအညီလုပ်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် cookies အသစ်များကိုမည်သို့ငြင်းပယ်နိုင်ပြီးရှိပြီးသား cookies များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကွတ်ကီးများနှင့် flash cookies များကိုလက်ခံရန်စီစဉ်ထားသောမျှဝေထားသောကွန်ပျူတာများအတွက်၊ သင်တစ် ဦး စီ၏အဆုံးတွင်သင်လုံးဝထွက်ရန်အကြံပြုပါသည်။
OrganicHemp.eu အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များ၏စာမျက်နှာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်ကူးယူပြီး log files များတွင် server log files ဟုခေါ်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာအစုများတွင်အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည် - ပြန်လည်ရယူခြင်းနေ့စွဲနှင့်အချိန်၊ ဝင်ရောက်စာမျက်နှာ၏အမည်၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ရည်ညွှန်း URL (ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့ဆောင်သော URL မူရင်း)၊ လွှဲပြောင်းထားသောအချက်အလက်ပမာဏနှင့်အသုံးပြုသောဘရောင်ဇာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ။ အသုံးပြုသူများ၏ IP လိပ်စာများကိုအသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင်ပယ်ဖျက်ပြီးအမည်ဝှက်လိမ့်မည်။ အမည်ဝှက်ခြင်းကိစ္စတွင် IP လိပ်စာများကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသီးခြားခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်အသိအမှတ်မပြုနိုင်တော့ပါ။ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ ကြီးမားသောလူအင်အားနှင့်အချိန်များစွာပေးဆပ်ခြင်းတို့မှသာပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းနှင့် Organic Hemp ဆိုင်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်၊ အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၊ အမှားများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရှာဖွေရန်နှင့်ဆာဗာစွမ်းရည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ဤမှတ်တမ်းဖိုင်ဒေတာအစုများကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်အကဲဖြတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် Organic Hemp Shop သည်လူကြိုက်များသည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပြီးအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အမြန်ဆုံး ၀ ယ်ယူမှုကိုဆက်လက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မှတ်တမ်းဖိုင်များကိုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Organic Hemp ဆိုင်ရှိမည်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများသို့မဟုတ်အမှားများကိုမဆိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာရှာဖွေပြီးဖြေရှင်းနိုင်သည်။
6.1 GOOGLE ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဂူဂဲလ် Analytics သည်ဂူးဂဲလ် Inc ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ။ Google Analytics သည် cookies များကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောစာသားဖိုင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ (သင်၏ IP လိပ်စာအပါအ ၀ င်) နှင့်ပတ်သက်သောကွတ်ကီးများမှစုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုများသောအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆာဗာများပေါ်တွင်ဂူဂဲလ်မှထုတ်လွှင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် gat._anonymizeIp () ;; ကုဒ်အားဖြင့် Google Analytics ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ IP လိပ်စာများ (IP-Masking ဟုခေါ်သော) အမည်မသိစုဆောင်းမှုကိုသေချာစေရန်။ သင်၏ IP လိပ်စာကိုဂူဂဲလ်မှစုဆောင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်သင်၏မည်သူမည်ဝါနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ခြင်းမရှိစေရန်အတိုကောက်ပုံစံဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် IP အမည်ဝှက်ခြင်းစတင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါကသင်၏အီးမေးလိပ်စာသည်အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်း၌သို့မဟုတ်ဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၏အခြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောနိုင်ငံများအတွင်း၌ဂူဂဲလ်မှသင့်ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်သာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ IP လိပ်စာအပြည့်အစုံကိုဂူဂဲလ်ဆာဗာသို့ပေးပို့ပြီးအတိုကောက်လုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုသင်အသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများကိုစုဆောင်းရန်နှင့်အခြားအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်အတွက်ဂူဂဲလ်သည်ပေးထားသောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် ဂူဂဲလ် Analytics မှပေးထားသောအိုင်ပီလိပ်စာကိုအခြားဂူဂဲလ်ဒေတာနှင့်ပေါင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဂူဂဲလ်မှထုတ်လွှင့်မှုမှတစ်ဆင့်၊ ဤအချက်အလက်များကို visit ည့်သည်ကွန်ပျူတာ၏ cookies တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ Algorithm ကို အခြေခံ၍ Criteo GmbH သည်အမည်ဝှက်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော surfing အပြုအမူကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအခြားထုတ်ဝေသူများ (ထုတ်ဝေသူများဟုခေါ်သော) ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သီးခြားကြော်ငြာညွှန့်ပေါင်းများအနေဖြင့်ပစ်မှတ်ထားထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်များကိုပြသနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့ visit ည့်သည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်သိရှိစေရန်ဤအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များသည်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားအခြားအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းများမဖြစ်ပေါ်ပါ။
အသုံးပြုသောနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို Criteo GmbH ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒတွင်တွေ့နိုင်သည်။ http://www.criteo.com/privacy/an တတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရား ၀ င်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အခြေအနေတွင် Google က၎င်းအချက်အလက်များကိုသူတို့စုဆောင်းထားသည့်အခြားဒေတာများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူသင်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုဂူဂဲလ်မှကောက်ယူရန် / လုပ်ဆောင်ရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်၏ browser software ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းအားသင်တားဆီးနိုင်သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်၏လုပျငနျးမြားကိုအသုံးပွုနိုငျမညျမဟုတျကွောငျးကြှနျုပျတို့ထောက်ပြသညျ။ ထို့အပြင်၊ သင်ကဂူဂဲလ်အား cookie များမှထုတ်လုပ်သောဒေတာများကိုရယူခြင်း / ရယူခြင်းမှရရှိနိုင်သည့် browser plug-in ကိုရယူခြင်း / ထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်တားဆီးနိုင်သည်။ ဒီအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုပါက Google Analytics နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုသော visitors ည့်သည်များ၏လှည့်စားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အမည်ဝှက်ထားသောအချက်အလက်များကို Criteo GmbH မှစုဆောင်းသိမ်းဆည်းသည်။ အချက်အလက်များကို cookies ည့်သည်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cookies များမှတဆင့်သိမ်းဆည်းသည်။ Algorithms များကို အခြေခံ၍ Criteo GmbH သည်အမည်ဝှက်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော surfing အပြုအမူကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအခြားထုတ်ဝြေဖန့်ချိသူများ (ထုတ်ဝေသူများဟုခေါ်သော) ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သီးခြားကြော်ငြာညွှန်းစာများအဖြစ်ပစ်မှတ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်များကိုပြသနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့ visit ည့်သည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်သိရှိစေရန်ဤအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များသည်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားအခြားအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းများမဖြစ်ပေါ်ပါ။ Criteo ၏နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒတွင်ဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုများသည် Microsoft ကူးပြောင်းခြင်းခြေရာခံခြင်းကိုအသုံးပြုသည် (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက Microsoft Bing Ads သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cookie ကိုသတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် Microsoft Bing နှင့် Organic Hemp တို့မှကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများကိုနှိပ်လိုက်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ရောက်သွားပြီးယခင်ကသတ်မှတ်ထားသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာ (ပြောင်းလဲခြင်းစာမျက်နှာ) သို့ရောက်သွားသည်။
Bing ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားသောအသုံးပြုသူစုစုပေါင်းကိုသာကြားရသည်။ အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်ပတ်သတ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမပေးပါ။ ခြေရာခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်မပါ ၀ င်ပါကသင်၏ browser ၏ချိန်ညှိချက်များမှတစ်ဆင့်လိုအပ်သော cookie ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းသင်ငြင်းပယ်နိုင်သည်။
Microsoft Bing တွင်အသုံးပြုသော privacy နှင့် cookies များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင် Microsoft ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ဒီ site သည်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသောတစ် ဦး ချင်းလည်ပတ်မှုများ (အမည်ဝှက်ထားသော IP address ကိုသာအသုံးပြုခြင်း) ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် CrazyEgg.com ခြေရာခံခြင်းကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤခြေရာခံကိရိယာသည် cookies များကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သို့လေ့လာသည်၊ ဥပမာအကြောင်းအရာကိုမကြာခဏနှိပ်လေ့ရှိသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုမှုပရိုဖိုင်းကိုအမြင်အာရုံဖော်ပြသည်။ ထိုကိရိယာကိုအသုံးပြုသောအခါသင်အသုံးပြုသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း၊ ကလောင်အမည်များကိုသုံးသည့်အခါအသုံးပြုမှုကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာဖန်တီးသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်သည် CrazyEgg.com မှထုတ်လုပ်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်း၊ ဤညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကန့်ကွက်နိုင်သည်။
privacy အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါက CrazyEgg.com တွင်ဒီမှာနှိပ်ပါ။
၆.၆ GOOGLE ADWORDS
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လည်း Google ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ Google Adwords ကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဂူဂဲလ်ကြော်ငြာမှတစ်ဆင့်ရောက်ရှိပါကသင်၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် cookie ကိုထည့်သည်။ အသုံးပြုသူလာရောက်လည်ပတ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်သွားသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒီကွတ်ကီးများသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာပြီးနောက်တရားဝင်မှုပျောက်ဆုံးပြီးကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အသုံးမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်သောသုံးစွဲသူတိုင်းသည်ကွဲပြားသောကွတ်ကီးများရရှိသည်။ ကွတ်ကီးများကို Adwords အသုံးပြုသူများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှရှာဖွေ။ မရပါ။ Cookie မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းကိုရွေးချယ်သော Adwords အသုံးပြုသူများ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ သို့ဖြင့် Adwords အား၎င်းတို့၏ကြော်ငြာများကို နှိပ်၍ ပြန်ညွှန်းပေးသောသုံးစွဲသူအရေအတွက်စုစုပေါင်းကိုရရှိစေသည်။ သို့သော်၊ သူတို့သည်သုံးစွဲသူများအားကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားပြုသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသူတို့မရရှိကြပါ။ ခြေရာခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်မပါ ၀ င်ပါကသင်၏ browser setting မှတစ်ဆင့် cookie ၏လိုအပ်သော setting ကိုလည်းငြင်းပယ်နိုင်သည်။
“ www.googleadservices.com” ဒိုမိန်းမှ cookies များကိုပိတ်ဆို့ရန်သင်၏ browser ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကူးပြောင်းခြင်းခြေရာခံခြင်းအတွက် cookies များကိုလည်းပိတ်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းဆိုင်ရာဂူးဂဲလ်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်အသုံးဝင်သောကိရိယာ Hotjar (Hotjar Ltd. ) သည်အသုံးပြုသူများလိုချင်သည့်အရာများကိုပိုမိုနားလည်စေရန်၊ သူတို့၏ကလစ်များ၊ ဘုံဘိုင်များနှင့် scrolling အပြုအမူ (အပူမီးခွက်များဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုအမြင်အာရုံအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာလိုချင်သည်ကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီသည်။ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းများကိုအနာဂတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
Hotjar မှသင်၏အချက်အလက်များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိလိုပါကဤနေရာ၌သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုကိုးကားပါ။
GOOGLE BY 7.1 DOUBLECLICK
ဂူဂဲလ်မှနှစ်ချက်ကလစ်သည် Google Inc ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“ Google”) ။ ဂူဂဲလ်မှကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါကသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများကိုတင်ပြရန် cookies များကိုသုံးသည်။ သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်မည်သည့်ကြော်ငြာများပေါ်လာပြီးမည်သည့်ကြော်ငြာများကိုကြည့်ရှုသည်ကိုခြေရာခံရန်သင့်ဘရောက်ဇာကိုအမည်ဝှက်ဖော်ထုတ်သည့်နံပါတ် (ID) သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကွတ်ကီးများတွင်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မပါဝင်ပါ။ DoubleClick cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ အခြေခံ၍ ကြော်ငြာများကိုဂူဂဲလ်နှင့်၎င်း၏တွဲဖက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုခွင့်ပြုသည်။ ကွတ်ကီးများမှထုတ်လုပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဂူဂဲလ်မှအကဲဖြတ်ရန်ယူအက်စ်ရှိဆာဗာတစ်ခုသို့ပေးပို့ပြီးထိုတွင်သိမ်းဆည်းသည်။ ဂူဂဲလ်မှအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည်တရား ၀ င်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်သာမန်အမိန့်ဒေတာအပြောင်းအလဲကြောင့်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို Google သည်၎င်းအချက်အလက်များကိုသူတို့စုဆောင်းထားသည့်အခြားဒေတာများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူသင်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုဂူဂဲလ်မှကောက်ယူရန် / လုပ်ဆောင်ရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်၏ browser software ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းအားသင်တားဆီးနိုင်သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်၏လုပျငနျးမြားကိုအသုံးပွုနိုငျမညျမဟုတျကွောငျးကြှနျုပျတို့ထောက်ပြသညျ။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် DoubleClick Deactivation Extension အောက်ရှိရရှိနိုင်သည့် browser plug-in ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုထုတ်လုပ်သောဒေတာများကိုဂူဂဲလ်မှစုဆောင်း / ပြုပြင်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည် Digital Advertising Alliance ရှိ Doubleclick cookies များကိုပိတ်နိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသောရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
PROPELLERADS သည်ဆိုက်ပရပ်စ်၊ Limassol၊ ၃၀၃၂၊ Karaiskaki လမ်း ၁၅၊ Propeller Ads Ltd ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Propellerads သည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများကိုပြသရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်မည်သည့်ကြော်ငြာများပေါ်လာသည်နှင့်မည်သည့်ကြော်ငြာများကိုကြည့်ရှုသည်ကိုစစ်ဆေးရန်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုကလောင်အမည်အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ID) ပေးလိမ့်မည်။ ကွတ်ကီးများတွင်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်မှုသည် Propeller Ads နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ အခြေခံ၍ ကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ခွင့်ပြုသည့် PROPELLERADS cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဖော်ပြခဲ့သောအတိုင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူသင်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကောက်ယူ / ပြုပြင်ရန် Propeller ကြော်ငြာများကိုသင်သဘောတူသည်။ သင်၏ browser software ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် cookies များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းအားသင်တားဆီးနိုင်သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်၏လုပျငနျးမြားကိုအသုံးပွုနိုငျမညျမဟုတျကွောငျးကြှနျုပျတို့ထောက်ပြသညျ။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် Propeller ကြော်ငြာများကိုကွတ်ကီးများမှထုတ်ယူသောအချက်အလက်များကိုထိုသို့ပိတ်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင် Propeller Ads Ltd ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုကိုးကားပါ။
7.3 Facebook Book Pixel
Facebook Pixel သည်လူမှုကွန်ရက် Facebook Inc မှပိုင်ဆိုင်သည်၊ 1 Hacker Way၊ Menlo Park, CA 94025, USA, သို့မဟုတ်သင်အီးယူ၌တည်ရှိပါက Facebook အိုင်ယာလန်လီမိတက်၊ ၄ Grand Canal Square၊ Grand Canal Harbour, Dublin 2, အိုင်ယာလန်
Facebook pixel သည် Organic Hemp ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အထောက်အကူပြုသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လူများလုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုနားလည်ရန်နှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန် Facebook pixel ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်အတိုချုပ်ပြောရရင်ငါတို့ Facebook ကမ်းလှမ်းမှုကိုစိတ် ၀ င်စားသူသို့မဟုတ်အလားတူခေါင်းစဉ်များ / ထုတ်ကုန်များ (စိတ်ကြိုက်ပရိသတ်များလို့ခေါ်ပါတယ်) ကိုစိတ်ဝင်စားသော Facebook သုံးစွဲသူများကိုသာကြော်ငြာများကိုပြရန် Facebook Pixel ကိုအသုံးပြုသည်။ Facebook pixel ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများသည်အသုံးပြုသူများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့်စိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ပါ။ Facebook pixel ၏အကူအညီဖြင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Facebook ကြော်ငြာများ၏ထိရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်နားလည်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် Facebook ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပြီးနောက်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းရှိ၊ ) ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ကြော်ငြာများကိုတင်ပြခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏အချက်အလက်များအားပြုပြင်ခြင်းသည်သူတို့၏ယေဘူယျအချက်အလက်များအသုံးပြုမှုပေါ်လစီအားဖြင့်ပိုမိုနားလည်နိုင်သည်။ Facebook pixel နှင့်ပတ်သက်သောအထူးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထက်ပါ link များအပြင် Facebook ၏ Preferences and Help ကဏ္inများတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်အမှာစာပရိုဆက်ဆာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အထူးစာချုပ်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်းကိုတတိယပါတီများထံလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန်အတွက် Facebook အားတာဝန်ခံစေသည်။
Facebook Pixel ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်“ ပြောင်းလဲခြင်း Cookies” များကိုသိုလှောင်ခြင်းအတွက်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် opt-out ရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သငျသညျ Facebook pixel နှင့် Facebook ကြော်ငြာများ၏မျိုးဆက်ဆီသို့သင့်ရဲ့ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မည်သည့်ကြော်ငြာအမျိုးအစားများကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်ကိုသင် Facebook ၏အကူအညီအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုမှုကိုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ Setting များသည်ပလက်ဖောင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် desktop ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် mobile devices ကဲ့သို့သော device အားလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ Network Advertising Initiative မှတွေ့ရှိသော opt-out စာမျက်နှာမှတဆင့်မီတာနှင့်မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ထပ်မံ၍ သင်သည် US website aboutads.info သို့မဟုတ် European website youronlinechoices.com မှတဆင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လူမှုကွန်ရက်အမျိုးမျိုးမှလူမှုရေးပလပ်အင်များ (“ ပလပ်အင်များ”) ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤပလပ်အင်များ၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်ဥပမာအားဖြင့်အကြောင်းအရာများကိုဝေမျှနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ခံနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် OrganicHemp.eu တွင်ပလပ်အင်များအားပိတ်ထားသဖြင့်မည်သည့်အချက်အလက်မျှမပို့ပါ။ “ Activate Social Media” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပလပ်ဂင်များကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ ပလပ်အင်များအားရိုးရှင်းသောကလစ်တစ်ခုဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤပလပ်အင်များကိုအသက်သွင်းပါကသင်၏ဘရောင်ဇာသည်သက်ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ယက်၏ဆာဗာများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်မည်။ plugin ၏ပါဝင်မှုကိုလူမှုကွန်ယက်မှသင့် browser သို့တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ plugins များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုကွန်ယက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ပါကသင်၏အတွေ့အကြုံကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရှင်းပြရန်၊ အကယ်၍ သင်သည်ပလပ်ဂင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပါက၊ ဥပမာ“ Like” ခလုတ်ကိုနှိပ်လျှင်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထားခဲ့လျှင်၎င်းအချက်အလက်များသည်သင်၏ဘရောင်ဇာမှလူမှုကွန်ယက်သို့တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီးထိုနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်နယ်ပယ်နှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှထပ်မံတိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပြင်သင်၏ဆက်နွယ်သောအခွင့်အရေးများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုသက်ဆိုင်ရာကွန်ရက်များ (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ privacy မူဝါဒကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
သင်သည်လူမှုရေးကွန်ယက်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုရသေးသည့်တိုင်တက်ကြွသောလူမှုရေးပလပ်အင်များပါသည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများသည်ထိုကွန်ရက်များသို့ဒေတာများကိုပို့နိုင်သည်။ Web plugin တစ်ခုဖွင့်တိုင်း active plugin တစ်ခုက cookie ကိုသတ်မှတ်သူတစ် ဦး စီသတ်မှတ်သည်။ သင်၏ browser သည်ကွန်ယက်ဆာဗာနှင့်အချိန်တိုင်းတွင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုဘဲဤ cookie ကိုသတ်မှတ်သောကြောင့်၊ ကွန်ယက်သည်သင်အသုံးပြုသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုသည့်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွင်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါဤအမှတ်အသားကိုနောက်ပိုင်းတွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်၊ အောက်ပါ plugins များဖြစ်သော Facebook, Twitter နှင့် Pinterest ကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုရေးကွန်ယက်များကိုသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုတက်ကြွသောပလပ်အင်များမှတဆင့်မရယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ (သို့) သင်၏ဘရောင်ဇာ၏ချိန်ညှိချက်များ (“ Third-party cookies” ကိုရွေးပါ) ကို သုံး၍ ရနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် browser သည်အခြားပံ့ပိုးသူများထံမှ embedded အကြောင်းအရာများအတွက်ဆာဗာသို့ cookies များကိုပေးပို့တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤချိန်ညှိချက်များဖြင့်အခြားစာမျက်နှာပေါင်းစုံမှလုပ်ဆောင်မှုများသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA မှလည်ပတ်သောလူမှုရေးကွန်ယက် Facebook.com မှ plugins များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ Facebook ရဲ့သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနဲ့လင့်ခ်ကိုဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်။
Twitter Inc. , 795 Folsom St. , Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA မှလည်ပတ်သောလူမှုရေးကွန်ယက်ဖြစ်သော Twitter.com မှ plugins များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ Twitter ၏လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်ဆက်စပ်သော link ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Pinterest Inc. , 635 High Street၊ Palo Alto, USA, USA မှလည်ပတ်သောလူမှုကွန်ယက် Pinterest မှ plugins များကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသည်။ Pinterest ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ဆက်စပ်သော link ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၉။ လူမှုရေးလက္ခဏာ (VIA FACEBOOK)
သင်၏လက်ရှိ Facebook ပရိုဖိုင်နှင့်တိုက်ရိုက်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်ပထမ ဦး ဆုံး Facebook သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုတွင်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကို သုံး၍ လော့အင်လုပ်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုပါ အကယ်၍ သင်သည် Facebook ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါကဤအဆင့်ကိုကျော်သွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က၎င်းတို့နှင့် Organic Hemp (အများပြည်သူဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ သူငယ်ချင်းများစာရင်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်လက်ရှိနေအိမ်) တို့အကြားမည်သည့်အချက်အလက်ပေးပို့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းကို“ OK” ခလုတ်ဖြင့်အတည်ပြုပါ။ ထုတ်လွှင့်သောအချက်အလက်များဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသည်၊ ၎င်းမှာသင်၏မိတ်ဆွေစာရင်းအားကျွန်ုပ်တို့မှသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိချေ။ သင်၏ဖောက်သည်အကောင့်နှင့်သင်၏ Facebook အကောင့်အကြားအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်မှုမရှိတော့ပါ။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကျယ်အဝန်းနှင့် Facebook မှအချက်အလက်များကိုထပ်မံပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပြင်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ဆက်နွယ်သောအခွင့်အရေးများနှင့်ချိန်ညှိချက်များရွေးချယ်မှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၏ privacy မူဝါဒကိုထပ်မံကိုးကားပါ။
10. E-MAIL & ဖော်မြူလာ
ဖောက်သည်များ၏မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန် Zendesk လက်မှတ်အရောင်းစနစ်၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း၊ Zendesk Inc. , 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102 ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်သင်၏နာမည်၊ ပထမအမည်၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိပုံစံမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေဆက်သွယ်ပါကသင်၏တိကျသောတောင်းဆိုချက်ကိုဆောင်ရွက်ရန်သင်ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ပေးအပ်ထားသည့်အချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ထားသောဒေတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခုံဌာနရှိစာသတင်းများအားနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအဆက်အသွယ်များအတွက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ အဆက်အသွယ်ပုံစံသို့ထည့်သွင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အပေါ်အခြေခံသည်။
၁၁။ ငွေပေးချေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ
Klarna သည်အမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုပေးသည်။ သင် Klarna (Klarna Checkout Solution) နှင့်သင်ငွေပေးချေရန်ရွေးချယ်ပါက Klarna သည်သင့်ထံမှအမျိုးမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကောက်ယူလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Klarna သည်အနုပညာ၏အဓိပ္ပာယ်အတွင်းတရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည့်၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းအတွေ့အကြုံများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ၆ ။ ၁ လီတာ DSGVOf။ Klarna cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါ link တွင်တွေ့နိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို data processing အတွက်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစာဝှက်ဖြင့်လုံခြုံစွာကူးစက်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မှာကြားမှုနှင့်ဖောက်သည် login နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SSL (Secure Socket Layer) ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားစနစ်များအားနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံများမှတဆင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူများ၏အချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရယူခြင်း၊
MT 10: 00-16: 00 နာရီ
မူပိုင်ခွင့် 2021 © OrganicHemp